Usosayensi Osemusha Uhlonishwe Yisikhungo Sase-Afrika Health Sciences
UDkt Andrew Eloka-Eboka, oqokwe njengolungu lesikhungo sesayensi sase-Afrika i-African Academy of Sciences (AAS).
Unjiniyela wase-UKZN uDkt Andrew Eloka-Eboka umenyezelwe njengelungu lesikhungo sesayensi esiphambili i-African Academy of Sciences kusukela ngonyaka wezi-2017 kuya kowezi-2021, ungomunye wama-Afrika amane kuphela eNingizimu Ne-Afrika amukelwe kulesi.
I-AAS iyinhlangano yase-Afrika enekomkhulu layo eKenya, ihlose ukugqugquzela intuthuko e-Afrika ngokusebenzisa isayensi, ubuchwepheshe nokuqamba okusha. Lesi sikhungo sasungula uhlelo lwamalungu ngonyaka wezi-2015 ukuze sihloniphe futhi silekelele izifundiswa ezisakhula ukuthi zithuthuke zifinyelele ezingeni lomhlaba kwezocwaningo.
I-AAS ikhethe ososayensi abangama-22 ngokusebenzisa uhlelo lokubheka amakhono- bebekhethwa ezifundeni ezinhlanu zase-Afrika.
‘Lezi zifundiswa ezisathuthuka zikhombise ubungoti emikhakheni yazo futhi zikufanele ukuhlonishwa,’ kushu uMqondisi we-AAS uSolwazi Berhanu Abegaz. ‘Sizosebenzisana nezikhungo zabo ukuze zibahlinzeke ngamathuba okuthuthukisa imisebenzi yabo nokusebenzisa amakhono abo ekuthuthukisweni kweAfrika.’
Laba abanga-22 abaneziqu ze-PhD bangaphansi kweminyaka engama-40 baqokwe emazweni ase- Benin, Cameroon, Egypt, Ghana, Kenya, Morocco, Nigeria, Ningizimu Afrika, Tanzania, Tunisia, Uganda and Zambia, emva kohlelo lokuhlunga olunzulu obelusingethwe ososayensi abaqavile abangamalungu e-AAS emahhovisi ayikomkhulu esikhungo.
U-Eloka-Eboka usebenza emkhakheni wezobunjiniyela bamakhemikhali nobemishini futhi uqale ucwaningo lwakhe lwangemva kokuthola iziqu zobudokotela e-UKZN eSikoleni sezobuNjiniyela lapho elulekwa khona uSolwazi Freddie Inambao. Ucwaningo lwakhe luthinta imikhakha yezobuchwepheshe obusebenza amandla aphehlwa ngemvelo, ezokuguquka kwamandla nezezinjini ezisebenza ngamandla okushisa lapho egxile kwezeziphehlimlilo, iziphehlimandla, udizili wemvelo nemvelo.
UEloka-Eboka uthe uthokozile ngokuqokwa njengelunga le-AAS. ‘Uma umsebenzi onzima uhambelana namathuba lokho kuphenduka okubizwa ngenhlanhla,’ usho kanje. ‘Ukusebenza kanzima okungaphezulu kwakha ithuba lenhlanhla enkulu futhi. Ngakhoke lo mklomelo ngiwunikela kuMariya umama kaNkulunkulu ongcwele kakhulu.’
Njengelungu le-AAS u-Eloka-Eboka uzoxhaswa ukuze akwazi ukuhambela izingqungquthela, imihlangano, imihlangano yokucobelelana ngolwazi nokunye ukuze athuthukise amakhono ache kwezokubhalwa kweziphakamiso, izibonelelo nokwethula okuqanjiwe ukuze athole izibonelelo ezengeziwe, ukwenza ngcono izinga lakhe lokushicilela nokuqinisekisa ukuthi ucwanmingo lwakhe lunomthelela emphakathini. Uzobe ecijwa osasayensi be-AAS asebenamava.
USolwazi Quarraisha Abdool Karim, oyiphini likamongameli wesikhungo esifundeni saseNingizimu Ne-Afrika futhi onguMqondisi we-CAPRISA uthe lolu hlelo lwe-AAS belu nokuqhudelana okukhulu futhi lufunwa ososayensi abaphambili abasakhula ngoba luhlonishwa kakhulu emikhakheni yonke futhi luletha amathuba okuxhumana nabanye ososayensi ezwekazini lonke lase-Afrika kanye nososayensi abaphambili futhi abahlonishwayo.
‘Lokhu kuyisinyathelo nomphumela obaluleke kakhulu ku-Andrew,’ usho kanje.